printer-3DSL-450S Shiinaha SL 3D-saaraha iyo qeybiye | Warshadaha digital
Jiilkii labaad ee 3DSL madbacadaha-S taxane
Max dhista mugga: 450 * 450 * 330 (mm) (Standard 330mm, si qoto dheer ee taangiga cusbi noqon kartaa dawaarle ka dhigay).
Iyadoo taangiga cusbi badeli.
Max wax soo saarka: 120g / h
dulqaadasho cusbi: 10kg
sal-dhigida technology RP
Rapid wadanay (RP) waa technology saarka cusub in marka hore la soo bandhigay ka Maraykanka ee dabayaaqadii 1980. Waxaa isku guulaha casriga ah sayniska iyo farsamada sida technology CAD, technology gacanta tiro, technology laser iyo technology wax, iyo waa qayb muhiim ah oo ka mid ah technology-saarka sare. Si ka duwan hababka goynta dhaqanka, wadanay degdeg ah wuxuu isticmaalayaa farsamo la xirrira, taas oo qalabka oo israac raacsan yihiin superimposed mishiinka qayb noocooda saddex geesood ah. Waa midda koowaade, software Yeeelid ah xaleef geometry CAD ka mid ah sida ay dhumucdiisuna waxay a daaha gaar ah, oo hesha taxane ah oo warbixin dusha. Madaxa la xirrira of mishiinka wadanay degdeg ah waxaa gacanta ku haya nidaamka ay gacanta ku sida laga soo xigtay warbixin ay dusha laba dhinac-cabbir. Bedesheen ama laga gooyay si ay u sameeyaan layers khafiif ah oo qaybaha kala duwan oo si toos ah superimposed galay hay'adaha saddex dhinac-cabbir ah
Si ka duwan soo saarka dhaqanka reductive, RP isticmaalaa hab wax raasamaal lakabka-by-lakabka si loo farsameeyo daydo adag, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa daro Warshadaha, (AM) ama Geedka Dhalxiga ah Warshadaha Technology, (LMT).
Astaamaha u gaarka ah farsamada RP
H ighly dabacsan, waxay soo saari kartaa wax lagu daydo adag 3D oo ah qaab-dhismeedka kasta oo adag, iyo kharashka wax soo saarka durba waa ka madax banaan kakanaanta ee alaabta.
C model AD driving toos ah, habka wax taaj oo kale ah oo gebi ahaanba digital, ma kulan gaar ah ama qalab waxaa looga baahan yahay, iyo design iyo warshadaha (CAD / Cam) waa heer sare isku dhafan.
H heelitir saxnimada, ± 0.1%
H ighly reductive, oo awood u leh samaynta faahfaahin aad u wanaagsan, derbiyada khafiif ah
M jir ah oo tayo leh dusha waa heer sare
F xawaaraha AST
H ighly iswada: geeddi-socodka waxaa si buuxda iswada, habka ay u baahan tahay ma qabashada aadanaha, iyo qalabka noqon karaa mid lala joogin
Codsiyada of technology RP
technology RP waxaa si balaadhan looga isticmaalo goobaha ay:
Moodooyinka (Conceptualization & bandhigid):
Design warshadaha, si degdeg ah u helaan waxyaabaha fikirka, dib u soo celinta of fikradaha design, Exhibition, iwm.
Prototypes (Design, Falanqaynta, Xaqiijinta & Imtixaanka):
Xaqiijinta Design iyo falanqaynta, repeatability Design iyo ayna iwm
Qaababka / Qaybo (Secondary wax taaj oo kale & Casting Hawlgallada & wax soo saarka-badan oo yar yar):
Duro Vacuum (caaryada silicone), duray cadaadis Low (qar, caaryada epoxy) iwm
habka codsiga ee RP
habka codsiga bilaabi kartaa mid ka shay, sawiro 2D ama fikrad. Haddii kaliya shayga waa la heli karaa, talaabada ugu horeysa waa in iskaan shayga si aad u hesho xogta CAD ah, tag revese habka engineeing ama wax ka beddelka kaliya ama beddelid ka dibna bilowdo hawsha RP ah.
Haddii sawirada 2D ama fikrad ka jira, waxaa lagama maarmaan ah si ay u tagaan nidaamka Qaabaynta 3D isticmaalaya software gaarka ah, ka dibna si hanaanka prining 3D tagaan.
habka RP Ka dib, waxaad ka heli kartaa model adag imtixaanka functional, imtixaanka shirka ama tag nidaamyada kale ee saarayay sida ay baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Hordhac of technology SL
Magaca qoyska waa stereolithography, sidoo kale loo yaqaan laser Asagoo arigtadaa ka wadanay degdeg ah. Mabda'a waa: laser waxaa diiradda u gal dusha sare ee cusbi dareeraha photosensitive iyo iskaan sida uu qaabka cross-qeybaha kala qayb ka mid ah, si ay u eegista waxaa la daaweyn, ka barta in ay saf dusha, si ay u dhamaystiraan Daaweynta ka mid ah lakabka, ka dibna madal dhifashada loo dhigi by mid ka mid ah oo dhumucdiisuna waxay daaha iyo recoated la lakabka cusub cusbi a iyo daaweyn by laser ilaa model oo dhan adag waxaa la aasaasay.
Advantage ee Generation 2aad ee SL 3D Daabacado of SHDM
H heelitir hufnaan, iyo xawaaraha ugu sareeya gaari karaan400g / hiyo wax soo saarka gudaha 24 saacadood reach10kg karo.
L Muga dhista arge, size heli karo waa360 * 360 * 300 (mm), 450 * 450 * 330 (mm), 600 * 600 * 400 (mm), 800 * 800 * 550 (mm), iyo Muga kale dhista kartoo.
M waxqabadka aterial waa raqiis ah oo heer sare ah hagaagay ee dhinacyada kala duwan ee xoog, adkeysiga iyo iska caabin-heerkulka sare, ku haboon codsiyada injineernimada.
O bviously hagaagtay sax size iyo xasiloonida.
M qaybo ultiple waa la daaweyn karaa waqti isku mid ah in software gacanta oo waxaa jira qaybo ka mid kaamil ah shaqo is-curinta.
S uitable wax soo saarka Dufcaddii yar.
U technology buul nique taangiyada cusbi la mugga kala duwan, 1 kg cusbi laga daabacan karaa, taas oo gaar ahaan ku haboon ee cilmi-baarista iyo horumarinta.
R taangiga cusbi eplaceable, cusbi kala duwan si fudud loo beddeli karin.
taangiga cusbi badeli
jiid oo keliya soo baxay iyo ku riix, waxaad daabacan kartaa cusbi a kala duwan.
taangiga cusbi of taxane 3DSL waa isbedel (Marka laga reebo 3DSL-800). Waayo, printer 3DSL-360, taangiga cusbi waa la mode dhaansha, markii uu bedelay taangiga cusbi ah, waxaa lagama maarmaan ah in ay hoos u taangiga cusbi ilaa hoos iyo kor laba qabsado qufulka, iyo jiid taangiga cusbi ka soo baxay. Shub cusbi cusub ka dib markii uu si fiican u nadiifinta haanta dumin kara, ka dibna kor u qabsado qufulka iyo riixdo taangiga cusbi galay printer iyo sidoo quful.
3DSL-450 iyo 600 3DSL waa la nidaam la mid ah taangiga dumin kara. Waxaa jira 4 trundles at dureeri ee taangiga dumin kara si loo fududeeyo ka bixitaanka iyo riixaya in.
nidaamka ciidammada indhaha laser adag
3DSL taxane madbacadaha SL 3D ansixiyeen qalab sare awood adag laser ah 3W iyo dhererka ruxruxo wax soo saarka si joogto ah waa 355nm. Awoodda wax soo saarka waa 200mw-350mw, qaboojinta hawada iyo qaboojinta biyaha waa optional.
(2). Iftiinta 1
(3). Iftiinta 2
(4). Dogob Expander
Galvanometer oolnimada sare
Max xawaaraha iskaanka: 10000mm / s
Galvanometer waa motor a lulid gaar ah, ay aragti aasaasiga ah waa la mid ah sida mitirka hadda, marka hadda qaarkood maraa gariiradda, rotor ku fido doonaa xagal gaar ah, oo xagal darbo waa saamiyeed si ay hadda ka . Sidaas galvanometer ah waxaa kaloo loo yaqaan scanner galvanometer. Laba vertical rakibay foomka galvanometer laba jiho iskaanka ee X iyo Y.
Wax soo saarka block engine imtixaanka-baabuur
Baarista qayb ka yahay block engine baabuur, Part size a: 165mm × 123mm × 98.6mm
Part mugga: 416cm³, Print 12 gogo 'waqti isku mid ah
miisaanka Total ku saabsan yahay 6500g, oo dhumucdiisuna: 0.1mm, xawaaraha Strickle: 50mm / s,
Waxay qaadataa 23 saac inay ku dhameystaan, 282g celcelis / h
Wax soo saarka ay calaacalaha kabaha test-
Print 26 calaacalaha kabaha waqti isku mid ah.
Waxay qaadataa 24 saac in ay ku dhameysan
Celceliska 55 min , waayo, mid kaliya ee kabaha
Next: Xararad 3D Scanner SX 3x 7X
Nyala oo 3D printer
Xararad 3D Scanner SX 3x 7X
SL printer 3D 3DSL-600S
Xararad midabo 3D Scanner hore